Eedmalaha Inantu Aqoondarri Bey Eersatay!
Muddo iminka laga joogo bil ayey aheyd markii aan meel kamid ah shabakadaha wararka soomaalida aan ku arkay qoraal ku saabsan gabar lugu sheegay magaceeda Ayaan Xirsi Cali oo Diinta Islaamka u geftay iyadoo ku tilmaantay mid qaldan.
Markaa oo faallo yar ka bixiyey gabdhaasi diinta aanan aqoonta fiican u laheyn ee meel ugu dhacday.
Hadaba markan oo ay tahay markii labaad ee wax ka qoro gabadhan soomaaliyada ah ayaa su’aashu waxey tahay maxaa igu kalifay inaan hadana markale qalinka u qaato arinta quseysa gabdhan?
Dabcan qofkastaa oo muslin ah waxaa waajib ku ah in uu difaaco diintiisa, saa daraadeed anigoo ka duulaya ooraahdaa ayaan jecleystay inaan anah markeyga aan sameeyo wax uun u eg ”difaac dimeed oo jawaab kaga bixinayo hadalkii meel ka dhaca ahaa ee kasoo yeeray gabdhaasi,waxaa markaas lama huraan igu noqotay inaan qalinkeyga ku dagaal gallo sida aan hada carabka ku dhiftay.
Hase ahaatee waxaase nasiib darro iyo wax laga naxo ah in qofka aflagaadata iyo ceyntanka kasoortay ay tahay shaqsi dumar ah oo ”Islaanimadda lugu dhalay ehelkeedana yihiin”. Hadana aan la ogeyn halka ay ka duuleyso iyo cida ay afhayeen u tahay iyadoo sida muuqata aanan aqoon buuxda u laheyn diinta Islaamka waxa ya tahay.
Si kastaaba arintu ahaatee waxaa markale gabdhii lugu sheegay magaceeda Ayaan ay saxaafad ku sheega reer Galbeed-ka buun buuniyeen warkii kasoo yeeray oo ay ku tilaameen talaabo geesinimo ay sameys ruux haween ah.
Hadaba marka aan dib u milacsano waxa wargeysyada reer Galbeedka ka qoreen gabdhaas iyo sababaha loo aaneyey iney diinta aflagaadeyso ee ay salka kuheyso ayaa waxaa la orankaraa in ay yihiin waxa ay sheegtay kuwo jeebkeeda ah oo markaas ay islaheed kusoo jiiido saxaafadan reer galbeedka xumaan doonka mooye aan wanaaga iyo samaanta raadin.
Ayaan waxaa sheegtay in xilligii joogtay Soomaaliya ay reeraheeda ku qasbi lahaayeen guur aysan raali ku aheen,dantana ku kaliftay iney kasoo baxsato dalkeeda kadib markii ay caawiyeen dad ay ku sheegtay saaxiibo ka shaqeeyey baxsadkeedii.
Waxaa sidoo kale Ayaan ku andacootay in gabdhaha muslinka ah yihiin ”kuwo jaahiliin ah oo aan wax labarin” xitaa haddii ay joogaan dhulka ay kajirto xuriyad kusheega iyo aqoonta aaney ka faa’iideysan ”oo lugu qasbo nin jooga dhulka baadiyaha ah in looguuriyo” Iyadoo markaas ay tusaale u soo qaaadatay gabdho Marookaan ah iyo laf ahaanteeda.
”Tiisa Daryeella Tu kale ku Darra!”
Sida ay ugu warantay Ayaan ragga wararka fidiya in xisibiga layirhaado [Dutch Liberty Party] uu ku martiqaaday iney isu soo sharaxdo xubin ka noqoshada baarlamaanka dalka Holland oo la sheegay iney dhacayaan sanadka inugu soo food leh,markaasna ay aqbashay inkastoo ay walaac ka muujisay arimo la xirriira nabadgalayeeda iyo mustaqbalka fog sida ay ku noolaan laheyd.Hadana waxaa taa kaaga daran iney la fikrad noqotay Ninkii ”Naceybka daran u hayey Islaamka” ee Pim Fortuyn oo ah siyaasi xag jira oo mayal adag,kaaso diinta ku sheegay iney tahay ”Mid danbeysa oo aan hormasayen”.
Mar aan sidaasi u sii dhereyna waxaa hadalkaasi mid u eg yiri Ra’iisalwasaaraha dalka Talyaaniga Silvio Berleskuni oo isagana ah nin aan fiiro dheereyn oo iska hadla, isagoo dhowr jeer islaamka aflagaadeeyey.
Mida laga naxo ee ay ku hadashay gabdhaasi aan dhaamin ragga aan soo xusay ee Islaamka aflagaadada daran u geystay ayaa ah iney tiri iyadoo tallo siineysa qolyaha ay u warameysay halka ay ku dhuumaalasaneyso iney haboon tahay in dalalka reer Galbeedka ay qarash badan ku bixiyaan sidii ay carruurta iyo haweenka u casriyen lahaayeen.
Taa macnaheedu waxaa weeye sidii ay ugaaleyn lahaayeen carruurta inkastoo hadalka aysan sidaasi u oran hadana ujeeda ka danbeysa ooraahdaa ayaa loo fasiran karaa.
Inkastoo aan qoraal lugu soo koobi karin hadaladii meel kadhaca ahaa ee laga soo weriyey ”Maan-gaabtaasi Soomaaliyeed” hadana waxaa wax laga naxo ah in iyadoo dumar soomaaliyeed oo aan weliba aqoon u laheyn diinta ay ku hadasho sidaasi iyadoo soo minguurisay ”fikraddo shisheeye” hadana isla saxan.
Runtii waxaa Ayaan darro ah in Ayaan ay maanta sidato magacii soomaali ee islaanimada lugu yaqiinay oo diintii iyo soomaalinamadii ay waxaan macno laheyn ka dooratay, islamarkaasina faraha lagashay Diintii Ilaahey.
Hadaba Ayaan inskatoo aysan aheyn qofkii ugu horeeyey ee soomaali ah oo gaallo raacda, balse waxey noqotay Midii ugu darneyd” ee taariikh-da soomaaliyeed xusi doonto soomaalidana waxey ku maah maahdaa ”Nin dhuuni raacay waa nin seefi qaaaday!,layaab malaha kuwii ka horeeyey iyada ayaa meel gaarin.
Ogolaanshaha ay Ayaan ogolaatay iney isu soo sharaxdo xubin ka noqoshada baarlamanka dalka holland waxaan leeyahay ”Tiisa Daryeelaa Tukale Kudarra! ayey soomaalida horey u tiriye ee taada Islaanimo ee aad meel ugu dhacday marka dib habeyn ku samee inta aad u hanqaltaageysid waxaadan gaari karin iyo qowmiyad ka tashatay ayaahaood danbe boqolaal sanno kahor,oo xitaa haddii aad xubin kanoqoto baarlamaka dalkaasi aadan kusoo kordhineyn magac aan ka aheyn inaad tahay Madow dhaqankeeda iyo diinteeda u daran.
Ugu danbeyntiina waxaan kusoo koobayaa qoraalkeyga In falka ay Ayaan maanta u sameysay aad ku heshid magac iyo saxaafadu ha ku buun buuniso,laakinse aaqiradeedii isa seejisay.
Inkastoo aanan qalinka u soo qaadan inaan Ayaan ka faallooda shaqsiyan waxa ay tahay iyo waxa ku kalifay iney sidaasi tiraahdo,hadana waxaa jira bulshadda soomaalida dhexdeeda in si xun u fekerta oo markaasi u aragta in badi dumarka soomaalida ay sidaasi yihiin.
Mana ahan wax lala yaabo in haweenku yihiin xubin jilicsan oo u baahan daryeel si aysan meel aan Alle raali ka aheyn ugu dhicin.
Maxaa yeelay Illahey SW ayaa ka abuuray feer qaloocan oo haddii la damco in latoosiyana jabeyso.
Waxaase nasiib xummo ah in Bulshadii ay Ayaan oo wada meerin meel walba shanta qaaradood ku kala daadsan yihiin iyagoo magac u ah dhaqmo iyo diimo siloon halisna u ah berito iney dalkii kusoo laabtaan iyagoo xambaarsan dhaqamo iyo diimo kale.
Bulshada Soomaaliyeed-na ee jecel nabada iyo hormarka magaca soomaali waxaan kula talinayaa in aaney fududeysan arimaha qaar ee ay u baahan inta goori goor tahay in talaabo ku haboon la qaado lana wacyi geliyo bulshadda soomaaliyeed ee muslinka ah.
Haddiise dhagaha la fureysto waxaa iman doonto maalin aan wax laga gaaraa aysan jirin.
Hadalka kasoo yeeray Ayaan ee ku aadaanaa in dumarka iyo carruurta la casriyeeyo waa hadal meel fog shanqartiisa kayeereyso oo iyada dhambaal ahaan loogu soo dhiibay,Soomaalidana waxaa ay tirhaadaa ”Caqli gaallo iyo Indho quraanjo mindna lama garto!”
... Laba halisood oo Soo food saaray Soomaalida Qarniga
.... KHUDBATUL WADAAC
Khudbadii ugu dambeeysay ee Nabiga SCW GUJI
..... Ayan Xersi oo noqotay Salman Rushdi-ga somalida
32 jir soomaaliyeed oo dhawaan sheegatay ineey diinta islaamku "caburiso isla markaana xaqirto dumarka " ayaa GUJI
Gabadhiisii oo Jirtey 6-toddobaad: Magaalada St. paul ee gobolka Minnesota aaya lagu xiray Siciid Muuse Guuleed GUJI